KOMISHANKA DOORASHOOYINKA SL & SADDEXDA XISBI QARAN OO WAKHTI CUSUB U CAYIMAY QABSOOMIDA DOORASHOOYINKA IYO DIIWAANGELINTA | WWW.SOMALILAND.NO
KOMISHANKA DOORASHOOYINKA SL & SADDEXDA XISBI QARAN OO WAKHTI CUSUB U CAYIMAY QABSOOMIDA DOORASHOOYINKA IYO DIIWAANGELINTA
Posted on Abriil 10, 2008 by Weriye2
Hargeysa(S/L.no 09.04.08) – Gudoomiyaha Komishanka Doorashooyinka Qaranka Somaliland Md.Maxamed Ismaaciil Maxamed (Kabo-Wayne) iyo ku xigeenkiisa Md.Xirsi Cali Xaaji Xasan ayaa caawa si rasmiya daboolka uga qaaday in Saddexda Xisbi Qaran [KULMIYE,UDUB iyo UCID] iyo Guddiga Doorashooyinku ay isla meel dhigeen Wakhti Cusub oo loo cayimay Doorashooyinkii Golayaasha deegaanka iyo Madaxtooyada inay ku dhacaan.
Isla markaana waxay ku heshiiyeen inay diwaan-gelintu dhamaato 5 October 2008, oo ay doorashada Deegaanku qabsoonto 7 October 2008, halka ay doorashada Madaxtooyadana inay qabsoonto 31 December 2008.Masuuliyiinta Komishanka waxay caawa sidaasi ka sheegeen Shir ay ku qabteen Xaruntooda.
Gudoomiyaha Komishanka Somaliland Md. Maxamed Ismaaciil Maxamed [Kaba-weyne] oo ugu horayn halkaa ka hadlay, ayaa isaga oo sharaxaad ka bixinayay heshiishka ay Xisbiyada wada-gaadheen, waxa uu yidhi “Waxa caawa sharaf noo ah in aanu halkan isugu nimi Xaruntii Akademiga, oo aanu maanta ku kala saxeexanay saddexda Xisbig Qaran, heshiish aanu ka gaadhnay diwaan-gelinta iyo doorashooyinka [labada doorasho ee soo socda] wakhtigoodii aanu ku heshiinay.”
Mar uu Gudoomiye Kuxigeenku Kaba-weyne la hadlayey dadweynaha waxa uu yidhi“Waxaan aad iyo aad ugu faraxsan-nahay, oo aan u sheegayaa dadweynaha in uu Komishanku isaga oo la kaashanaaya saddexda Xisbi Qaran ay qaraar caddaan ah wada-gaadheen, kaas oo ay hesshiis ku yihiin, oo anaguba heshiis kula nahay.”
Guddoomiye ku-xigeenka Komishanka Doorashooyinka Md. Xirsi Xaaji Cali Xasan, oo halkaa ka hadlay waxa uu yidhi“Farxad ayay noo tahay in aanu caawa saddexdii Xisbi Qaran [KULMIYE, UCID iyo KULMIYE] iyo Komishankii Qaranku ay ku heshiiyeen wakhtiga doorashooyinka iyo diwaan-gelinta iyo qaabka ay u socon doonto. Waxaau u soo gudbinay saddexda Xisbi Qaran qoraal cadaynaya wakhtiga loogu talo-galay doorashooyinka iyo diwaan-gelinta, waana ay ku heshiiyeen, oo saddexdooduba way saxeexeen.”
Isaga oo hadlkiisa sii watana waxa uu intaa raaciyey oo uu yidhi “Waxaana aanu habeen dambe todobada fiidnimo xaflad heer qaran ah ku qaban doonaa Ambassador Hotel. Waxaana aanu ku faraxsan-nahay oo aanu Ummada ugu bushaaraynaynaa in saddexda Xisbi ku heshiiyeen wakhtiga doorashooyinka iyo diwaan-gelinta, waxayna ku heshiiyeen in diwaan-gelintu dhamaato 5 October 2008, isla laba cidho ka dib 7 October in doorashada hore dhacdo iyo in ay doorashada dambe dhacdo 31 December 2008.”
Gudoomiye ku xigeenku waxa kale oo uu sheegay in heshiishkaa Xisbiyada iyo Komishanku wada-gaadheen in ay berito u gudbinayaan Shir-gudoonka Golaha Guurtida, si iyaguna u saxeedaan dhaqan-galkiisa.
Waxaa isna halkaa ka hadlay Axmed Xaaji Cali Cadami, oo ka socday Xisbiga mucaaridka ah ee Kulmiye, oo waxa uu yidhi“Xisbi walba saddex qof ayaa ka yimi, arrintanina walaacawgeeda ayay lahayd, dabadeetana khasab ayay noqotay in masuuliyad Qaran lagu waajaho, waxaana isu yimi. Wax khilaaf ah oo jiraa ma jiro, waa lagu heshiiyey, waa la isla qaatay. Xafladaa iyo munaasibadaa loo samaynayana, bi’idnilaahi kariim iyana waxaanu rajaynaynaa inay sidaa si leeg lagu gaadhi doono, oo qadiydaa maal-mahan-ba la hadal yahay ay soo gunaadanto.”
Cabdilaahi Siciid Ismaaciil oo ka socday xisbiga UCID, oo isna madashaa ka hadlay, ayaa waxa uu yidhi “Sidaa ay cadeeyeen dhamaantood heshiiskaa ayaanu gaadhnay, waxaa inoo caado ah had iyo gooraale marka ay doorashooyin jiraan ama xiligoodu soo dhawaado ama muddada doorashooyinka waxaasi hore u qabsoomi waayaan ee xiligu cidhiidhi noqdo, dee Axsaabta iyo Komiishanku ay go’aan ka gaadhaan. Kii ayuun-baa la waday, oo khilaafkaas ayaa la xalinayey, dhibaato kale-na ma jirtee dadkeenu wuxuun-bay buun-buuniyaan.”
Isaga oo hadalkiisa sii watana waxa uu intaa raaciyey, oo uu yidhi “Shalayto Komiishanku halkan Akademiga nabada ayuu saddexdayada xisbi Qaran isugu kaayo-yeedhay, dabeetana jadwalka ayaa na loo qaybiyey, ilaa xalaytana waanu soo naaqishaynay, oo Xisbi waliba gaarkiisa ayuu isugu noqday, runtiina anaga oo aan isu iman, ayaa Xisbi waliba gaarkiisa Komishanka ugu ixtiraamay wakhtigii ay soo sameeyeen.”
Waxaa isna halkaa ka hadlay Maxamed Cabdilaahi oo ka socday Xisbiga Muxaafidka ah ee UDUB, waxaanu yidhi“Waxaanu isugu nimi in la gaadho heshiis u dan ah ummada, oo lagu lafa-guro wax alla wixii khlaafaad ah ee jira. Waxaanu markaa ku heshiinay, oo aanu saxeexnay, oo aanu aqbalnay wakhti-doorasheedkii ay soo diyaariyeen Komishanku, kaas oo aanu saxeexnay.”
Isaga oo hadalkiisa sii watana waxa uu intaa raaciyey oo uu yidhi “Waanu ku shaqaynaynaa heshiiskaa, Komishankana waanu la shaqaynaynaa, Axsaabtana anaga oo gacmaha is-haysana, ayaanu wax walba ka midho-dhalinaynaa.”
« SOMALILAND KEEN TO HOST US BASE, HOPEFUL ON OIL CUDUR-DAAR JACEYL “Qeybtii Shanaad” »